Oge udo: Archives - Okwu ugbu a
Ọ bụghị a Magic Wand
Ihe na March 24, 2022 March 24, 2022 by Mark
THE Nraranye nke Russia na Machị 25th, 2022 bụ nnukwu ihe omume, ma ọ bụrụhaala na ọ na-emezu doro anya arịrịọ nke Our Lady of Fatima.Olu Secdị Nsọ nke Russia ọ mere?
N’ikpeazu, Obi m nke n’enwe obi ọcha gha enwe mmeri. Nna dị nsọ ga-edoro m Russia nsọ, a ga-atụgharị ya, a ga-enyekwa ụwa oge udo.—Amụmụ nke Fatima, ebelebe.tv
Agbanyeghị, ọ ga-abụ ihie ụzọ ikwere na nke a dị ka ịfe ụfọdụ ụdị anwansi ga-eme ka nsogbu anyị niile pụọ. Mba, Ndokwa ahụ anaghị emebi iwu Akwụkwọ Nsọ nke Jizọs kwusara nke ọma:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Azịza nye Jimmy Akin - Nkebi nke 2
Ihe na January 11, 2022 January 12, 2022 by Mark
Azịza ndị Katọlik Onye na-akwado nkwado ehi, Jimmy Akin, na-aga n'ihu na-enwe ọgbaghara n'okpuru oche ya na webụsaịtị nwanne anyị nwanyị, Gụkọta na Alaeze ahụ. Nke a bụ nzaghachi m na agbapụ ọhụrụ ya…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na Nwere ike 28, 2021 June 8, 2021 by Mark
THE ihe kacha dị ịtụnanya banyere Onyenwe anyị Jizọs bụ na O nweghị ihe Ọ na-edebe n'onwe Ya. Ọ bụghị nanị na ọ na-enye Nna otuto niile, kama mgbe ahụ ọ na-achọ ịkọrọ ya ebube ya us rue na anyị na- ndị nketa na ndị ọrụ mmekọrịta ha na Kraist (dika Ef 3: 6).
Sabbathbọchị Izu Ike Na-abịanụ
Ihe na April 15, 2021 April 16, 2021 by Mark
IHE Afọ 2000, Chọọchị arụsiwo ike ịdọta mkpụrụ obi n'ime obi ya. Ọ tachiri obi ná mkpagbu na aghụghọ, ndị jụrụ okwukwe na esemokwu. Ọ gabigawo oge nke ebube na uto, ịda mba na nkewa, ike na ịda ogbenye ebe ọ na-agwụ ike na-ekwusa ozioma - ma ọ bụrụ naanị oge ụfọdụ site na ndị fọdụrụ. Ma otu ụbọchị, ndị Nna Chọọchị kwuru, ọ ga-anụ ụtọ “Restbọchị Izu Ike” - Oge Udo n'ụwa tupu ọgwụgwụ nke ụwa. Ma gịnị n'ezie bụ ezumike a, gịnịkwa na-eweta ya?Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na December 25, 2020 December 27, 2020 by Mark
"THE afọ nke ije ozi agwụwala. ”
Okwu ndị ahụ dụrụ m n'obi ọtụtụ afọ gara aga bụ ihe ịtụnanya kamakwa o doro anya: anyị na-abịa na njedebe, ọ bụghị nke ije ozi kwa se; kama, ọtụtụ ụzọ na usoro na nhazi nke Nzukọ-nsọ ​​ọgbara ọhụụ mara nke emesịrị mee ka ndị mmadụ n'otu n'otu, belata, na ọbụna kewaa Isi nke Kraịst bụ. agwụcha. Nke a bụ “ọnwụ” dị mkpa nke Churchka ga-abia ka ya nwee mbilite n'ọnwụ ọhụrụ, obu ifuru ohuru nke ndu Kraist, na idi nso ya n’uzo ohuru.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na November 27, 2020 November 30, 2020 by TiDign
Pentikọte (Pentikọst), nke Jean II Restout (1732)
ONYE nke ihe omimi di egwu banyere “oge ikpeazu” nke ekpughere n’oge awa a bu eziokwu na Jisos Kraist n’abia, obughi n’anu aru, kama n'ime Mmụọ ihiwe ala-eze ya ma chịa n’etiti mba niile. Ee, Jizọs ga- bia n'anu aru Ya nke ebube, ma obibia nke ikpe azu ya bu “ubochi ikpeazu” nke diri nelu uwa mgbe oge gedebe. Yabụ, mgbe ọtụtụ ndị ọhụụ n'ụwa niile gara n'ihu ịsị, "Jizọs na-abịa n'isi nso" iji guzobe Alaeze Ya na "Oge Udo," gịnị ka nke a pụtara? O sitere n’akwukwo nso ma obu ya na Omenala Katoliki?